Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493922 times)
« Reply #590 on: August 31, 2011, 12:35:19 PM »
"(အမျိုးသမီးကြီး ခါးထောက်မတ်တပ်ရပ်လျက် …..)
“(ဆိုင်ရှင်ကောင်မလေးနှင့် ကောင်လေး …)
ဟာ……. ဦးလေးတို့ အန်တီတို့ တော်ကြပါတော့ ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့ internet
ဆိုင်ကရန်ပွဲဆိုပြီး ဟိုချောကလက်မြို့က ကုန်ကြမ်းရှာနေတဲ့ တွေတို့က bLog တွေထဲထည့်ရေးအင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်လို့
« Reply #591 on: August 31, 2011, 03:51:48 PM »
« Reply #592 on: August 31, 2011, 10:49:37 PM »
ယခုကိစ္စသည် သူမဘ၀အတွက် ပထမဆုံးကိစ္စပင်ဖြစ်ပါသည်။
သူမသည် ကျောခင်းကာလှဲအိပ်ရင်း ကြွက်သားများကိုတောင့်ထားမိလေသည်။
သူ့ကိုငြင်းဆန်ရန် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံကို စဉ်းစားရင်း တတ်နိုင်သလောက်အေချိန်ဆွဲနေမိသည်။
သို့သော် သူကတော့ လုံးဝလက်လျော့ဟန်မပြပဲ သူမအနားသို့ တိုးကပ်...လာလေသည်။
ကြောက်နေသလားဟု မေးသောအခါတွင် သူမကရဲဝံ့စွာခေါင်းခါပြမိသည်။
သူသည် ယခုလိုကိစ္စများတွင် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏လက်ချောင်းများသည် နေရာမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားကြသည်။
အထဲထိနိုက်စမ်းလိုက်သောအခါ သူမ နာကျင်မှုဖြင့်တကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားပြီး အကြောအခြင်များတောင့်တင်းသွားသည်။
သူသည် ပြောထားသလိုပင် ညင်ညင်သာသာပြုလုပ်ကြောင်းသူမသိပါသည်။
သူက သူမမျက်ဝန်းကိုစိုက်ကြည့်ရင်း စိတ်မပူရန်၊ သူ့အနေနှင့် အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိကြောင်းထပ်ပြောပြန်သည်။
သူပြုံးပြသောအခါ သူမ စိတ်ကိုလျော့ချလိုက်ပြီး သူအတွက်လွယ်ကူစေရန် တတ်နိုင်သမျှကျယ်ကျယ်ဟပေးထားလိုက်သည်။
သူ့ကိုမြန်မြန်ကိစ္စပြီးအောင် ပြုလုပ်ရန် အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်မိလေသည်။
သို့သော်သူကတော့ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သာ ဆက်လုပ်ပါသည်။
နောက်တကြိမ်တွင်အသားမျှင်များစုတ်ပြတ်ပြီး တကိုယ်လုံးနာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရသည်။ သွေးအနည်းငယ်ထွက်လာသည် ကိုလည်း သူမသိရှိလိုက်သည်။
မျက်ရည်များပြည့်လျှံနေသော်လည်း မနာသယောင်ခေါင်းခါက ဆက်လုပ်ရန် ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်မိသည်။ သူက ကျွမ်းကျင်စွာ ဆက်လုပ်နေသော်လည်း သူဘာလုပ်နေမှန်းမသိအောင် သူမစိတ်လှုပ်ရှားကာထုံပေပေဖြစ်နေမိသည်။
အတန်ကြာသော် သူမမှအရည်အချို့ တာကျိုးသလိုပေါက်ထွက်သွားသည်ကို ခံစားရပြီး သူသည် အရာတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာ အပြင်သို့ထုတ်လိုက်လေသည်။
သူမ သက်ပြင်းမောများ ရှိုက်ထုတ်နေရင်း ကိစ္စအောင်မြင်ပြီးမြောက်သွားသည်ကို ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေမိသည်။ သူကနွေးနွေးထွေးထွေး ပြုံးပြရင်း တော်တော် ကိုင်ရတွယ်ရခက်တဲ့ ခလေးမဟု ရေရွတ်လေသည်။
ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်စကားကို သူ့အား ပြောလိုက်လေသည်။
မှတ်ချက်။ ။အထက်ပါအဖြစ်ပျက်မှာ သူမ၏ သွားနုတ်သည့်နေ့မှ ပထမဦးဆုံးအတွေ့ကြုံဖြစ်ပါသည်။
copy form myanmarhumour
« Reply #593 on: August 31, 2011, 11:00:03 PM »
ထပ်လိုသေးလား မိန်းခလေးရယ် ...
အမျိူးသား: မင်းငါ့ကို လက်ထပ်နိုင်မလား ..
အမျိူးသမီး: ရှင့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ခြံနဲ့တိုက်နဲ့ရှိလား။
အမျိူးသမီး: ဒါဆို BMW ကားကော ရှိလား။
အမျိူးသီး: ဒါဆို ရှင့် တစ်လ လစာဘယ်လောက်ရလဲ။
အမျိူးသား: လစာရယ်လို့တော့မရှိဖူး ဒါပေမဲ့ .......
အမျိူးသမီး: ဘာ ဒါပေမဲ့လည်း ......!!!! ရှင်မှာ ကျွန်မ မေးတာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိပဲ ကျွန်မ ကို လက်ထပ်ချင်သေးတယ် :x အံ့ပါရဲ့ နောက်တစ်ခါ လာပြောကြည့် ပါးကျိူးမယ်။:M9
ထိုအမျိူးသမီး ထွက်သွားပြီးနောက် တစ်ကိုယ်တည်း ရေရွတ်သံ ...
အမျိူးသား:ငါ့မှာ အပိုင်စားရတဲ့ ရွာတစ်ရွာရယ် ၊ အပန်းဖြေစရာ ကျွန်သုံးကျွန်းရယ် ၊ ဖရာရီကား သုံစီး နဲ့ ကားကုမ္ပနီ နှစ်ခုရှိနေတာကို ထပ်ပြီး BMW ၀ယ်ရအုန်းမှာလားဟာ ၊ လစာတဲ့ ငါကိုယ်တိုင် လစာပေးရတဲ့ သူဌေးပါဆို ဘယ်သူ့စီက လစာတောင်းရဦးမှာလဲဟာ လေပါတယ် ကောင်မလေးရယ် .... ။
« Reply #594 on: September 01, 2011, 03:14:12 AM »
တစ်ခါတုန်းက အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာ နိုက်ကလပ်တစ်ခုကို သွားကြသတဲ့..ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ ဘီယာတွေပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့ အခမဲ့သောက်သုံးခွင့်ပေးတာနှင့် ကြုံနေပါရော...။ ဒါနဲ့ သူတို.နှစ်ယောက်လည်း အမုန်းကဲပြီး အပီသောက်လိုက် ကြပါသတဲ့ ..မူးမူးနဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်း အပြန်လမ်းမှာ ရူရူးပေါက်ချင်စိတ်ကတားမရဆီးမရဖြစ်ပါလေရော..။ဒါနဲ့ဘေးဘီ ၀ဲယာကိုကြည့်လိုက်တော့ သင်္ချိုင်းတစ်ခုတွေ့ပါသတဲ့။
ပထမခင်ပွန်း။ ။ ဒို့အိမ်ကဟာနှစ်ယောက်ကိုတော့ ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလို့မဖြစ်တော့ဘူး ဟေ့ ..။
ဒီနေ့ငါ့မိန်းမ ပြန်လာတော့အတွင်းခံဘောင်းဘီပါမလာဘူးကွာ...တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ ။
ဒုတိယခင်ပွန်း။ ။အေး..မင်းကဘာဟုတ်သေးလဲကွာ..ငါ့မှာ ရူးတောင် ရူးချင်နေပြီ ။ ငါ့မိန်းမပြန်လာတော့ ဂုဏ်ပြုစာတန်းတောင် ပါလာသေးတယ်။
ဘာတဲ့ “ ခင်ဗျားကိုကျုပ်တို့တပ်စုတစ်ခုလုံးကမှတ်မှတ်ရရရှိနေမှာပါ " တဲ့ကွာ။ ။
credit: Myanmar Joke
« Reply #595 on: September 01, 2011, 03:20:06 AM »
စိတ္တဇဆေးရုံတွင်ဖြစ်သည်။ လူနာများကို ရောဂါသက်သာမသာ စစ်ဆေးရန် ခုံတန်းများတွင် ဆေးများသုတ်ထားပြီး ရုပ်ရှင်ပြသည်။ လူနာအားလုံးသည်…ထိုင်ချပြီးကြည့်ကြသည်..
ထိုအထဲတွင် လူနာတယောက်က သတင်းစာကို ခုံတန်းတွင်ခင်းလိုက်သည်။ ပြီးမှကြည့်သည်…ဆေးရုံအုပ်ကြီးသည်…ဒီလူနာသက်သာပြီဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်သို့ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်သည်.အိမ်ေ၇ာက်သော်…လူနာကိုသူဧ။်မိခင်ကမေးသည်..
အမေ ။ သား …သားကခုံမှာဆေးသုတ်ထားတာသိလို့သတင်းစာခင်းလိုက်တာလား?
လူနာ ။ အာ …အမေကလည်း…လူတွေအများကြီးသားေ၇ှ့မှာရှိနေတာကို…..မမြင်ရလို့ ပိုမြင့်သွားအောင် ခင်းလိုက်တာ…:P
အရူးများ များလွန်းသဖြင့် အရူးလျော့ပေါ့ရေးအစီစဉ်ဖြင့် ဆေးရုံအုပ်ကြီးသည် အခြေနေအကောင်းဆုံး အရူးလေးယောက်အား ခေါ်ယူကာ မေးခွန်းတစ်ခွန်းဖြင့် မေးကာ စမ်းသပ်လေ၏
“ကဲကဲ နံပါတ်(၁) အရူး မင်းစ ဖြေကွာ နှစ်နှလီဘယ်လောက်လဲ”
အရူး(၁)= “နှစ်နှစ်လီ ဟစ်တလာ ပါဆရာ” အခြေနေမကောင်း။
အရူး(၂)= “နှစ်နှစ်လီ ခွေး ပါ” တော်တော်ဆိုး၏။
အရူး(၃)= “နှစ်နှစ်လီ အင်္ဂါနေ့ ပါခင်ဗျ” ပိုဆိုး၏။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးစိတ်ဓါတ်ကျသွားသည်။
နောက်ဆုံးအရူး= “နှစ်နှလီ လေးပါ ဆရာ”
အင်း... ဒီကောင်ကတော့ အခြေနေမဆိုးဘူးပဲ... “ဒီကောင့်ကိုဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါကွာ”
“သြော်ဒါနဲ့နေပါအုံး မင်းဘယ်လိုလုပ် အဖြေကို လေးရတာလဲကွ”
“ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်ကို ငတုံး များမှတ်နေကြလားဗျ
ခင်ဗျားတို့ ဟစ်တလာကို ခွေးနဲ့စားကြည့်လိုက် ရလာတဲ့အဖြေကို အဂ်ါနေ့နဲ့ မြှောက်ရင် လေးမရလို့ ဘာရမှာတုန်း”။
« Reply #596 on: September 01, 2011, 03:24:28 AM »
ကောင်မလေး = အရင်လူတွေထက် ပိုချစ်တယ်...
« Reply #597 on: September 01, 2011, 03:30:05 AM »
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွာမည့် ရွှေမြန်မာများအတွက် မတက်မဖြစ် အထူးသင်တန်း
ပါဝင်သော ခေါင်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်...
ဆန်ဆေးနည်း၊ ထမင်းပေါင်းအိုးတည်နည်း၊ ကြက်သွန်နီလှီးနည်း၊ ကြက်ဥကြော်နည်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော်နည်း၊ လက်ဖက်သုပ်နည်း၊ ဆေးဘဲဥသုပ်နည်း တို့ကို အခြေခံကျကျ ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်သည်အထိ သင်ကြားပေးပါသည်။
ရယ်ဒီမိတ် မုန့်ဟင်းခါးထုပ်ကို ဆိုင်စားမုန့်ဟင်းခါးကဲ့သို့ဖြစ်အောင် ပြုပြင်နည်း
တစ်ယောက် တစ်ထုပ်နှုန်းဖြင့် လက်တွေ့ပြုလုပ်ရမည်။
ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ မြေပဲ ပစ္စည်း (၄) မျိုးဖြင့် ထမင်း တစ်နပ်စာပြုလုပ်နည်း
ကြက်ဥကို အသုံးပြု၍ ကြက်ဥကြော်၊ ကြက်ဥပေါင်း၊ မွှေကြော်၊ ကြက်ဥသုပ်၊ ကြက်ဥဖုတ်၊ ကြက်ဥဆားရေစိမ် စသည့်ဟင်းအမျိုးပေါင်း (၅၀) ကျော်ပြုလုပ်နည်း
လူမျိုးဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သောနည်းများကိုသာ သင်ကြားပေးသည်။
အခြောက်အခြမ်းပစ္စည်းများကို တာရှည်ခံ၊ အနံ့အသက်၊ အရသာမပျက်အောင် ထားသိုနည်း
သင်တန်း၏ မူပိုင် နည်းပညာသစ်များဖြင့် သင်ကြားပေးပါသည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဝယ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်များဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာပြုလုပ်နည်း
မုန့်လင်မယား၊ ကြာဇံချက်၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ နန်းကြီးသုပ်၊ နန်းလတ်သုပ်၊ နန်းသေးသုပ်၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ သရက်သီးသုပ်၊ မရမ်းသီးထောင်း၊ မရမ်းသီးသုပ် စသည့် အစားအစာအမျိုးပေါင်း (၅၀)ကျော်ကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် သင်ကြားပေးပါသည်။
ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ကို အသုံးပြု၍ ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ ဆီချက်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ခေါက်ဆွဲသုတ်၊ ပဲခေါက်ဆွဲ၊ ပလိန်း၊ ကြက်ဥနှင့် စသည်တို့ကို တရုတ်ခေါက်ဆွဲ၊ ထိုင်းခေါက်ဆွဲ၊ ကိုရီယားခေါက်ဆွဲ စသည်ဖြင့် အမျိုးစုံအောင် သင်ကြားပေးသည်။
လစာကို အိမ်ခန်းခ၊ ရေဖိုး၊ မီးဖိုး၊ အစားအသောက်၊ အဝတ်အစား၊ အိမ်ပြန်ပို့ရန် စသည်တို့ကို တစ်လစာလစ်ဟာမှု မရှိစေရန် စာရင်းရေးဆွဲနည်း
မိမိရသည့် လစာပေါ်မူတည်၍ ရေးဆွဲရန် အခက်အခဲရှိပါက သင်တန်းမှ online support ပေးပါသည်။
ကျောင်းတက်စဉ် အချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှာနည်း၊ ခွင့်မပြုသော အချိန်ပိုင်းအလုပ်များကို ခိုးလုပ်နည်း
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံရှိသူများ၏ video interview ဖြင့် ပြသ သင်ကြားပါမည်။
ကျောင်းသွားတက်မည့်သူများအတွက် Student Pass ဖြင့်ရရှိနိုင်သော Discount များကိုလည်း up to date စာရင်းနှင့်တကွသင်ကြားပေးပါသည်။သင်တန်၏ Home Page တွင်လည်း up to date စာရင်းများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အလုပ်လျှောက်နည်း၊ အင်တာဗျူးဖြေနည်း၊ အလုပ်ရရန် ယတြာချေနည်း
အောင်မြင်ခဲ့သူတို့၏ ပွဲတွေ့လုပ်နည်းများကို ပြုစုထားသော စာအုပ်ဖြင့်သင်ကြားပေးမည်။
Permanent Job အပြင် Weekend တွင် အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရန် ရှာဖွေနည်း၊ လျှောက်ထားနည်းများ
စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်း ဆင်းရဲခံနိုင်သူများအတွက် Elective ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။
Discount ပေးသော အချိန်အခါ နှင့် နေရာများကို ရှာဖွေဝယ်ယူနည်း
Internet, email များကိုအသုံးပြု၍ ရှာဖွေခြင်း၊ discount လက်မှတ်များ ရယူခြင်းတို့ကို လက်တွေ့သင်ကြားပေးမည်။
မိမိသွားရောက်မည့် နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ အားလပ်ရက်များတွင် အခမဲ့ (သို့) ပိုက်ဆံနည်းနည်းဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ် နိုင်သည့်နေရာများကို ရှာဖွေခြင်း နှင့်အသုံးချခြင်း
Google Maps ကို အသုံးပြု၍ မြေပုံများ၊ slide show များဖြင့် ပြသ သင်ကြားပါမည်။
Tourist Visa ဖြင့်သွားကာ အလုပ်ရှာမည့်သူများအတွက် immigration တွင် ဖြီးနည်း၊ ဖြန်းနည်း သက်တမ်းတိုးနည်းများကို ဝါရင့်အတွေ့အကြုံရှိသူများ ကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်း သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရေးကြီးသော စကား (၂)ခွန်းဖြစ်သည့် ထမင်းဆိုင်နေရာမေးနည်းနှင့် အိမ်သာနေရာမေးနည်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာအလိုက် လေယူလေသိမ်း မှန်ကန်သည်အထိ ပြုပြင်သင်ကြားပေးသည်။
« Reply #598 on: September 01, 2011, 03:32:08 AM »
မိန်းမဖြစ်သူ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေရာမှ ပြန်ရောက်လာသည်။
" ကျမ အဝေးမှာ (၆) ပါတ်လောက်သွားနေတယ်၊ အခု ပြန်ရောက်လာတယ်။ ရှင် တော်တော် နေစိမ့်တာပဲ။ ရှင် ကျမကို ပြောစရာ မရှိဘူးလား၊ အဝေးမှာ အကြာကြီး ရောက်နေတဲ့ မိန်းမ အတွက် ရှင့်မှာ ပြောစရာ စကားလေး တခွန်း တောင် မရှိဘူးလား"
"သေချာတာပေါ့ .. ပြောစရာ စကားတခွန်းရှိပါတယ်"
" ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ..".....
« Last Edit: September 21, 2011, 10:55:32 AM by tunaye2011 »
« Reply #599 on: September 01, 2011, 03:32:55 AM »
Dad: well son your mom and I got together at "facebook". We "setup"adate via "e-mail" and met in "cyber cafe". Your mom agreed to "download data" from my "hard drive" through "Data cable". Just when I was about to "transfer", we realized that none of us had "installed"a"firewall". It was too late to hit "delete". Nine months latera"pop-up window" appeared, saying 'YOU HAVE GOT A VIRUS'